CO-WIN (HK) inkampani encinane, professional izinto zeplastiki nophahla umenzi, samiselwa ukuba ukunika izixhobo ezisemgangathweni zeplastiki nophahla kakhulu ngamaxabiso aphantsi kakhulu kurhwebo lwehlabathi kunye igqiza leengcali ingcali abanikezela ngenkonzo kakhulu ezingaqhelekanga ukunceda ishishini lakho likhule. iimveliso zethu kukugubungela sheet PC incence, PC sheet eqinileyo, PC sheet ezibuhlazarha, ASA PVC sheet kophahla edityanisiweyo nemozulu, ASA intlaka zokwenziwa tile, ubushushu zigqunyiwe UPVC Iphepha kophahla 3 umaleko, ikhasi zu njl
Iqela Professional & namava Industry
Ekubeni iqela lethu zobungcali 13 amava kushishino, aba ukuvumela ukuba ukunika abathengi imveliso inkonzo yethu wena kunye nenkonzo OEM. Sinikezela iimveliso ezisemgangathweni premium kuphela, kwakhona ukunika ulawulo supply chain ebanzi esiqinisekisa unikezelo ngolwandle kakuhle. iimveliso zethu liqinisekisiwe kunye iminyaka 10-30 iwaranti ngokusekelwe izinto ezahlukeneyo kwaye inqanawa nganye yi-100% kuhlolwa phambi kokuba izinto ziyhunyelwe.
CO-WIN iya kuqhubeka sizama ababhetele thina ukuba ukukwandisa baxolile yinkonzo ukunceda abathengi ukuba ishishini iindleko-olusebenzayo kunye nobuchule kurhwebo lwehlabathi. Sijonge phambili imibuzo yakho kwaye Ndiyasebenzisana nani ukuze kuzuzwe win-win nentsebenziswano.